AFT: hofanina ireo tanora te hanoratra | NewsMada
AFT: hofanina ireo tanora te hanoratra
Manohana sy mampiroborobo ny teny sy ny literatiora malagasy ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba. Anisan’ny hetsika entiny manatratra izany tanjona izany ny « Manoratra aho », atrikasa fampianarana manoratra ho an’ireo tanora mihoatra ny 15 taona. Tanjona ny hampivoatra ny talenta ao anatin’ireo tanora, izay ho reharehan’ity Nosy ity, any aoriana any, sy ny hampiroborobo ny teny malagasy. Araka ny tsapa mantsy, toa mihamanalavitra ny fampiasana sy ny fahaizana ny tenim-pireneny ny tanora malagasy ankehitriny.
Hisy fizarana enina ny fiofanana, izay maharitra ora roa avy : ny 9 sy 23 febroary, ny 9 sy ny 23 marsa ary ny 6 sy ny 20 avrily. Hibahan-toerana ny fampiharana, mandritra ny fiofanana izay hoentin’i Arikoms Randria. Andiany voalohany amin’ny fianarana manoratra ity hotanterahina ity. Hisy lohahevitra isaky ny andiam-pampianarana ka hiompana amin’ny teknika fototra amin’ny fanoratana tantara « fiction » ny hozaraina amin’ireo tanora liana amin’izao voalohany izao.
Tsy fahita firy ny fiofanana tahaka itony, raha eo amin’ny tontolon’ny asa soratra. Tsy vitsy koa ny tanora manan-talenta, any ambadimbadika any. Heverina fa sehatra iray sarobidy azon’izy ireo hampivelarana ny fahalalany izao fiofanana izao.